आजबाट २० वर्ष पुराना गाडी गुड्न नपाउँने !
मकवानपुर । सरकारले आज चैत १ गतेबाट २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार २० वर्ष मुनिका गाडी गुडेको पाइएमा जफत गरी लिलाम गरिनेछ । २० वर्ष पुराना सवारी गुडाएमा समातेर कानुनी कारबाही गर्न प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले...
मनहरीमा बालकल्याण समाजको घटना व्यवस्थापन तालिम
मकवानपुर । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकामा बाल संरक्षण समितिका पदाधिकारीहरुका लागि घटना व्यवस्थापन सम्बन्धि तालिम प्रदान गरिएको छ । प्लान इन्टरनेशनल नेपाल मकवानपुरको आर्थिक सहयोग, बालकल्याण समाज मकवानपुरको प्राविधिक सहयोग तथा मनहरी गाउँपालिकाको समन्वयमा तीन दिने घटना व्यवस्थापन सम्बन्धि तालिम सञ्चालन गरिएको हो । जोखिममा रहेका...
सर्वोच्चको आदेशपछि के होला हेटौंडा-काठमाडौं सुरुङमार्गको भविष्य ?
मकवानपुर । हेटौँडा-कुलेखानी-काठमाण्डौँ सुरुङमार्गको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई १५ दिने कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । गत २०६६ साल भदौ ३ गते अधिवक्ता ध्रुवप्रसाद चौलागाईले हालेको रिटमा आदेश दिँदै सर्वोच्चले सरकारलाई सुरुङमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिनु भनेको थियो । सर्वोच्चका तात्कालिन न्यायधिश शुशिला कार्की र बलराम...
मकवानपुर। बाल सहभागितामा कार्यरत संस्थाहरुको साझा समूह (कन्र्सोटियमं) नेपालको आयोजना, प्लान इन्टरनेशनल नेपालको सहयोग र बालकल्याण समाज मकवानपुरको सहकार्यमा आज मकवानपुरको हेटौंडामा बाल सहभागिता अभिमुखीकरण तथा बालबालिकाको क्षमता मूल्याङ्कन सम्बन्धि कार्यशाला भएको छ । बाल कल्याण समाज मकवानपुरका अध्यक्ष डा. गणेश लामा बलको...
उपाध्यक्ष रानाले गरिन् निर्माणाधीन पक्की पुल अनुगमन
मकवानपुर । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पार्वती रानाले आज भीमफेदी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ छवेली र भीमफेदी गाउँपालिका वडा नम्बर ५, सुपिङ जोड्ने पक्की पुलको आइतबार निरिक्षण गरेकी छिन् । पूर्व सांसद सुवासचन्द्र ठकुरीको पहलमा सांसद क्षेत्र विकास कोषबाट रणनितीक योजना भित्रको निर्माण भइरहेको पक्की पुल निरिक्षण गरिएको हो...
ईन्द्रसरोवरमा महिलामैत्री हाते ट्रयाक्टर वितरण
मकवानपुर । मकवानपुरको मार्खु र फाखेलका कृषक समूहलाई ७ वटा हाते ट्रयाक्टर बितरण गरिएकोे छ । महिलाहरु कृषिमै आत्मनिर्भर भएको हुनाले उनीहरुलाई उत्प्रेरित गर्ने उदेश्यले कृषक समूहलाई महिलामैत्री हाते ट्रयाक्टर बितरण गरिएको हो । मार्खुमा ३ र फाखेलमा ४ वटा ट्रयाक्टर ईन्द्रसरोबर कृषि सहकारी संस्था र कृषक समूहलाई वितरण गरेको हो । नारीसिप...
मकवानपुरका चार वटा सामुदायिक वनमा सालकको अवस्था अध्ययन
मकवानपुर । अति संकटापन्न अवस्थामा रहेको सालकको अवस्थाका बारेमा मकवानपुरमा अध्ययन गरिएको छ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष रत्ननगर, चितवनले संकटापन्न अवस्थामा पुगेको स्तनधारी सालकको अवस्थाबारे मकवानपुरको चार वटा सामुदायिक वनमा अध्ययन थालेको हो । मकवानपुरका न्युरेनी, चुच्चेखोला, अशोक सामुदायिक लगायत चारवटा सामुदायिक वनमा सालकको...
क्षेत्रीय नकआउटको उपाधि एफसी लोथरलाई
मकवानपुर । पश्चिम मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका ३, पलाँसेमा सम्पन्न दोश्रो क्षेत्रीय नकआउट फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि एफसी लोथर मनहरी गाउँपालिका ६ ले जितेको छ । विहीबार प्रतियोगिताको फाइनल खेलमा एफसी लोथरले एफसी रमन्टारलाई २–० गोल अन्तरले हराउँदै उपाधि चुम्न सफल भएको हो । माणिकलाल स्मृति प्रतिष्ठानको आयोजनामा फागुन १९ गतेबाट...
असाहयको सहयोगार्थ ‘पञ्चायत’देखाइयो
मकवानपुर । मकवानपुर जागरण अभियानले विहीबार हेटौंडामा नेपाली चलचित्र पञ्चायतको च्यारिटि शो गरेको छ । समाजका अनाथ तथा असाहयका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने उद्घेश्यले च्यारिटि गरिएको अभियानका अध्यक्ष कृष्णराज कोइरालाले जानकारी दिए । चलचित्र हेरेका दर्शकले चलचित्रले मन जितेको प्रतिकृया दिएका छन् । चलचित्र प्रदर्शन अघि पत्रकार सम्मेलनमा...